Motor tsara kokoa dia nanjary avy Motor atrikasa ny Shandong Fada Group Corporation, izay ny orinasa-panjakana. Shandong Fada Group Corporation naorina tamin'ny 1976, dia ny mpisava lalana ny elektronika sy ny mpankafy vacuum-mpanamboatra madio kokoa ao Shina.
Tamin'ny taona 1980, ny orinasa nampahafantatra teknika ny lena sy maina banga madio avy ELECTROSTAR orinasa avy any Alemaina,-dehibe nandroso famokarana andalana ny andian-dahatsoratra maotera avy any Etazonia, Japana ary Soisa. Io no voalohany orinasa ao Shina, izay nahatratra faobe famokarana ny andian-dahatsoratra maotera.
Rehefa avy mianatra sy mitroka avy ny mandroso sy ny fitaovana teknolojia ho an'ny mihoatra ny 10 taona, dia lasa soa aman-tsara ny andian-dahatsoratra maotera tsindry ambony fa tsy nafarana milina fanasan-damba iray tamin'ny 1999. Tamin'ny Aprily 2000, Longkou Better Motor Co., Ltd dia voasoratra ara-panjakana soa aman-tsara izay manokana mpiara-tahiry orinasa. Ao sept 2005, ny orinasa niova anarana ho Shandong Better Motor Co., Ltd.